သငျသညျဝဘ်ပေါ်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ်လူရှုပ်သို့မဟုတ်လက်ညှိုးထိုးချင်တဲ့အခါ,ဒါပေမယ့်သင်တိတ်ဆိတ်စွာအတွက်ညစ်ညမ်းပြွန်အပေါ်စောင့်ကြည့်သောသူတို့အားလိင်ဗီဒီယိုများထက်ပိုမိုအပြန်အလှန်ဖွင့်တစ်ခုခုချင်တယ်,ထို့နောက်သင်ကစားအခမဲ့ကွန်ပျူတာလိင်ဂိမ်းကစားခြင်း၏စုဆောင်းခြင်းထွက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ညစ်ညမ်းဂိမ်းဆိုက်ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းတွေနဲ့လာ။ သင်ဒီမှာမြင်စုဆောင်းမှုစိတ်တွင်အချို့သောအရည်အသွေးမြင့်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ္းရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီးဒီဆိုဒ္မွာဂိမ္း၅ခုသာထည့္သြင္းထားပါတယ္။, ဒါကလည်းသင်လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမတိုးချဲ့သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်နှင့်အတူသင်၏ဘရောက်ဇာကိုတိုက်ရိုက်ဂိမ်းကစားပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။
သို့သော်ဤစုဆောင်းမှု၏ဂုဏ်အသရေကြောင့်၌ခံစားနိုငျသောအမျိုးသမီး၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်လာပါတယ်။ ကျနော်တို့လူတိုင်းအတွက်ဂိမ်းရှိသည်ဖို့အနည်းငယ်ဆိုဒ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်အပြင်,ငါတို့သည်လည်းအတူတူယုတ်အရေးယူသို့လုပ်ကြဖို့လိုသူစုံတွဲများအားဖြင့်ပျော်မွေ့နိုင်အချို့ဂိမ်းရှိသည်။ နောက်ပြီးကွီးမွတျကစားသမားမြားလိုအပ်စေခြင်းငှါအားလုံးဂိမ်းများ,လိင်တူချစ်သူဂိမ်းတွေနဲ့ပင်သင်၏အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးအချိန်ပေးဖို့အညစ်ညမ်းဂိမ်းနှင့်အတူ။, ဒါကြောင့်,ယနေ့ညကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်လာနှင့်သာသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကြံ့လိင်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုပျော်မွေ့,သင်မူကားအဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့လိင်စိတ်စူးစမ်းစေမည်. သင်ဒီမှာတွေ့အရာအားလုံးအခမဲ့ဘို့သင့်ထံသို့လာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှပူးတွဲပါကြိုးရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင်အရူးတူအောင်လိမ့်မည်ဟုစစ်မှန်တဲ့အခမဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းပါပဲ။
ကျနော်တို့အင်တာနက်အခုအချိန်မှာပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်အခမဲ့လိင်ဂိမ်း၏အကြီးမားဆုံးစုဆောင်းမှုတစ်ခုရှိသည်။ ဒါကမပြည့်စုံဂိမ်း၏နာရီရာပေါင်းများစွာင်,ငါတို့ဆိုက်၏ဂိမ်းအများအပြားမြင့်မားတဲ့ပြန်ကန်တန်ဖိုးကိုနှင့်အတူလာကြ၏။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ကျနော်တို့အပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်အသစ်ဂိမ်းထည့်သွင်းစောင့်ရှောက်,ဒါကြောင့်သင်အရာအားလုံးကိုကစားပြီးအောင်အချိန်အားဖြင့်,သင်ခံစားနိုငျဂိမ်းအသစ်ရှိလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ရှိသည်သောဂိမ်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကနေလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုဂိမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များပြောနေတာပါပဲ။ သင်၏အသားစားခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးသင်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်လုံးဝမရှိသောလိင်အတွေ့အကြုံရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ဤမျှလောက်များစွာသောလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ဤပရောဂျက်များသည်သင့်အားမည်သူမဆို ၀ င်ရောက်စေလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ဖြောင့်ကစားသမားအဘို့ထိုသူတို့ရှိသည်,လိင်တူချစ်သူကစားသမားများ,ငါတို့လိင်တူချစ်သူမြားနှငျ့သငျခွငျးမြားနှငျ့သငျခွငျးနိုငျရာတှငျအခြို့သော. သင်ပင်ဤဂိမ်းများ၏ဇာတ်ကောင်စိတ်ကြိုက်သူတို့ကိုသင်ချင်သောသူမည်သည်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေနိုင်သည်။, သူတို့ထဲကတချို့ကရုပ်ပြောင်ကနေနေကြပြီးသူတို့ကိုသင်ကာတွန်း,ကာတွန်းနှင့်ရုပ်ရှင်များမှသူငယ်၏အမျိုးမျိုးတို့ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၏လိင်ဂိမ်းများ,အောင်မြင်မှုများနှင့်မစ်ရှင်မှတဆင့်စေ့စပ်စောင့်ရှောက်မည်,ဒါပေမယ့်လည်းကြက်တိုက်ဆောက်မှတဆင့်. ဤအမျိုးအစားတွင်အချို့သောဂိမ်းများသည်လက်တွေ့ကျပြီးချိန်းတွေ့ခြင်းများအဖြစ်လာသည်။ အခြားဂိမ်းများသည်စိတ်စွဲလန်းမှု၊စိတ်စွဲလန်းမှုသို့မဟုတ်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအိပ်မက်များကဲ့သို့သောစိတ်ကူးယဉ်မှုအချို့ကိုနက်ရှိုင်းစွာနှစ်သက်သွားကြသည်။ အခြားသူများကသင်အနိုင်ယူဖို့ရှိသည်ရန်သူများကို,စဖော့ကမ္ဘာ၏စိတ်ကူးယဉ်ပါဝင်သောဝေါဟာရ၏အစစ်အမှန်အဓိပ္ပာယ်ကိုအတွက်ဗီဒီယိုအမည်ဝှက်အပေါ်ဖြောင့်ဖြစ်ကြသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့အများကြီးပိုင်သငျသညျန့်အသတ်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းကိုခံစားရန်အခမဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာကြည့်တိုက်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအခမဲ့ကွန်ပျူတာလိင်ဂိမ်းလို့အမည်ပေးထားပေမဲ့ဒီဘရောက်ဇာကိုအခြေခံတဲ့ဂိမ်းတွေဟာသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတပ်ဆင်ပြီးဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရမယ့်ဂိမ်းတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေသဘောပေါက်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏ဂိမ်းများကိုသင်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မက်ကွန်ပျူတာကိုသုံးလျှင်နေပါစေ၊သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှကျွန်ုပ်တို့ထံသို့သွားရောက်လျှင်နေပါစေ၊အကန့်အသတ်မရှိဤဂိမ်းကိုကစားနိုင်သည်။ အရာအားလုံးကိုသင်၏ဘရောက်ဇာတွင်တိုက်ရိုက်ကစားပြီးဂိမ်းများသည်သင့်အားချို့ယွင်းမှုများ၊နောက်ကျခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်ကျခြင်းများမှတစ်ဆင့်ဆင်းသွားစေလိမ့်မည်။